Inona ny haba amin'ny fizahan-tany ary aiza no ampiharina any Eropa? | Vaovao momba ny dia
Inona ny haba amin'ny fizahan-tany ary aiza no ampiharina any Eropa?
Maria | | Nohavaozina tamin'ny 31/07/2017 15:33 | About us, Tsangatsangana
Nandritra ny volana Jolay, Barcelona dia nanaiky ny hetra fizahan-tany vaovao ho an'ny fitsangantsanganana, izay hanampy ho an'ireo efa ampiharina amin'ny trano fandraisam-bahiny sy fitsangantsanganana. Na noho ny ezaky ny filankevitry ny tanàna hiaro ny tanànan'ny Condal tsy ho feno mpizahatany na noho ny faniriana hanangona vola, ny marina dia manandrana mandray fepetra ho an'ny fizahan-tany tompon'andraikitra izy ireo, toy ny ataon'ny governemanta eo an-toerana any Venise fehezo ny fidirana amin'ny Kianja St. Mark manomboka amin'ny taona 2018.
Fa inona no fiantraikan'ilay antsoina hoe hetra fizahan-tany amin'ny mpizahatany? Rehefa mandoa ny fotoam-pialan-tsasatra isika dia afaka mahita ny tenantsika ao amin'ny faktiora farany miaraka amin'ny vidiny avo kokoa noho io taha io. Aza adino ny lahatsoratra manaraka izay hiresahantsika ny momba ny hetran'ny fizahan-tany, ny antony ampiharana azy ary ny toerana aiza no misy an'io.
Tsy i Barcelona na i Venise irery no tanàna mampihatra ny hetran'ny fizahan-tany. Amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao dia efa ampiharina izy ireo, toa an'i Bruxelles, Roma, ny Nosy Balearic, Paris na Lisbon.
1 Inona ny haba haba?
2 Fa maninona no tsy maintsy mandoa ny hetran'ny fizahan-tany isika?
3 Ny tahan'ny fizahantany amin'ny antsipiriany
3.1 Hetra amin'ny rivotra
3.2 Saran'ny isaky ny fijanonana
3.3 Hetra fizahan-tany any Eropa
3.3.2 Firenena hafa any Eoropa
Inona ny haba haba?
Izy io dia hetra tsy maintsy aloan'ny mpandeha tsirairay rehefa mitsidika firenena na tanàna manokana. Ity hetra ity dia matetika ampandoavina rehefa mamandrika tapakilan'ny fiaramanidina na any amin'ny toeram-ponenana, na dia misy endrika hafa aza.
Fa maninona no tsy maintsy mandoa ny hetran'ny fizahan-tany isika?
Ny Kaomina sy ny governemanta dia mampihatra ny hetra amin'ny fizahan-tany mba hananana tahiry voatokana hanohanana ny fotodrafitrasa sy ny hetsiky ny fizahan-tany, ny fampandrosoana ary ny fitehirizana. Raha atao teny hafa, ny fiarovana ny lova, ny asa fanarenana, ny faharetana sns. Raha fintinina, ny hetra amin'ny fizahan-tany dia haba izay tsy maintsy averina amin'ny laoniny tsara ao an-tanàna izay notsidihina.
Ny tahan'ny fizahantany amin'ny antsipiriany
Hetra amin'ny rivotra
Rehefa manoratra sidina ianao dia miantehitra aminay andiana sarany ny zotram-piaramanidina handoavana ny vidin'ny fiarovana sy solika. Matetika izy ireo dia tafiditra ao amin'ny sarany farany amin'ny tapakila ary mandoa hetra amin'ny fampiasana seranam-piaramanidina sy fitaterana an'habakabaka.
Etsy ankilany, misy haba hafa ampiharina amin'ireo mpandeha izay mandao firenena. Izy ireo dia fantatra amin'ny hoe saram-pivoahana ary ampiharina any amin'ny firenena toa an'i Mexico, Thailand na Costa Rica.
Saran'ny isaky ny fijanonana
Io hetra amin'ny fizahan-tany io dia alaina amin'ny fijanonana amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny (ao anatin'izany ny trano hampiasaina amin'ny fialantsasatra) ary potehina ao anatin'ny faktioran'ny hotely na ampangaina ho isan-karazany, na izany na tsy izany dia iharan'ny VAT (taha nahena 10%). Ny orinasa mpizahatany dia manangona azy ary avy eo mandamina izany isaky ny telo volana amin'ny maso ivoho hetra mifandraika amin'izany.
Any Espana, ny vondrom-piarahamonina mahaleo tena tsirairay dia samy manana ny fifehezana ny hetra momba ny fizahan-tany, saingy mifanindry kosa izy ireo amin'ny fizarana vola amin'ny tahiry ho an'ny fizahan-tany maharitra.e mamela ny fiarovana, fikojakojana ary fampiroboroboana ny fananan'ny mpizahatany sy ireo fotodrafitrasa ilaina amin'ny fitrandrahana azy ireo. Raha fintinina dia ampiasaina hanomezana valiny sy hampiroborobo ny sehatra izy ireo.
Hetra fizahan-tany any Eropa
Any Espana amin'izao fotoana izao dia ny hetra amin'ny fizahan-tany ihany no aloa any Catalonia sy ny Nosy Balearic. Amin'ny vondrom-piarahamonina voalohany dia ampiharina amin'ny hotely, trano, trano ambanivohitra, toby fitaterana an-tsambo. Ny habetsany dia miova eo anelanelan'ny 0,46 sy 2,25 euro isan'olona isan'andro miankina amin'ny toerana misy ny fananganana sy ny sokajy misy azy.
Amin'ny vondrom-piarahamonina faharoa, ny hetra amin'ny fizahan-tany dia mihatra amin'ny sambo fitsangantsanganana, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny ary trano fialantsasatra. Ny haba dia mitentina eo anelanelan'ny 0,25 sy 2 euro isaky ny mpitsidika sy ny alina arakaraka ny sokajy fampiantranoana. Mandritra ny vanim-potoana ambany dia mihena ny taha, ary koa ny mijanona mihoatra ny valo andro.
Mihoatra ny antsasaky ny firenena eropeana no efa mampihatra ny hetra fizahan-tany mba hampiroboroboana ny sehatra. Ny sasany amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
Roma: Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny 4 sy 5 dia mandoa 3 euro ianao raha amin'ny sokajy sisa kosa dia mandoa 2 euro isan'olona sy alina ianao. Tsy mila mandoa io sarany io ny zaza latsaky ny 10 taona.
Milan sy Florence: ny hetra fizahan-tany 1 euro isan'olona sy alina dia ampiharina isaky ny kintana ananan'ny hotely.
Venise: Ny haben'ny hetra amin'ny fizahan-tany dia miovaova arakaraka ny vanim-potoana, ny faritra misy ny hotely sy ny sokajy misy azy. Amin'ny vanim-potoana avo 1 alina alina sy kintana dia voampanga ao amin'ny nosy Venise.
Ny hetra fizahan-tany any Frantsa dia mihatra manerana ny firenena ary miovaova eo anelanelan'ny 0,20 sy 4,40 euro arakaraka ny sokajy hotely na ny vidin'ny efitrano. Ohatra, 2% fanampiny no ampandoavina amin'ny fijanonana izay mihoatra ny 200 euro ny vidiny.
Ny hetra amin'ny fizahan-tany any Belzika dia miankina amin'ny toerana sy ny sokajy fananganana. Any Bruxelles dia avo noho ny any amin'ny firenena sisa izy ary eo anelanelan'ny 2,15 euro ny hotely kintana 1 sy 8 euro ho an'ny hotely kintana 5, isaky ny efitrano sy isan'alina.
Ao Lisbon renivohitra, ny hetra fizahan-tany dia 1 euro isaky ny mpitsidika mijanona ao amin'ny hotely na orinasa rehetra. Izy io dia tsy azo ampiharina afa-tsy amin'ny herinandro voalohany amin'ny fijanonana ao an-tanàna. Tsy mandoa izany ny zaza latsaky ny 13 taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona ny haba amin'ny fizahan-tany ary aiza no ampiharina any Eropa?
Tsidiho ireo toerana samihafa any Espana izay nalaina sary ny Game of Thrones
Ny morontsiraka 5 madio indrindra any Espaina ho an'ny fandroana